Turkey yokuzala | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Turkey yokuzala
Apple ezihlukahlukene "Iphupho": izinzuzo nezinkinga, ukutshala nokunakekelwa
Namhlanje, akukho apula ongakwenza ngaphandle kwama-apula. Lesi siko sijwayele kithi, esichazwe kumlando wezinganekwane, inganekwane, ama-epic kanye nezingoma. Ama-apula ezindaweni zethu zithandwa futhi adingekayo, athandwa kokubili okusha, nakwezinye izinto ezikhunjelwe noma amanye amalungiselelo. Umlando wokuzalisa izinhlobo ze-apula "Iphupho" Ezingxenyeni zethu akuzona ubusika obubandayo nakwezinye izikhathi obunzima, ngenxa yokuthi abafuyi baqhubeka bekhulisa izitshalo nezitshalo zeberry njalo, beletha izinhlobo eziningi ezingavumelani nezimo zezulu zesifunda sethu.
Izici ezizalisa ama-turkeys ekhaya
Ukukhulelwa kwezinkukhu kunenzuzo futhi kulula. Kodwa izinkukhu, amahansi noma amadada azikwazi ukuhlinzeka ngenani elinjalo lenyama ukuze londle umndeni omkhulu. Kule nkinga, ukhetho oluhle yi-turkeys, isisindo sayo singafinyelela ku-20-30 kilogram. Lezi zinyoni zinamanye amanani amaningi, okubaluleke kunayo yonke inyama yazo yokudla enhle kakhulu.
Izimo zokutshala izikhumba ze-turkey ku-incubator
Namuhla, ukuzala izinyoni emakhaya akuvamile. Kulesi sihloko sizochaza ukuthi singabamba kanjani amaqanda aseTurkey ekhaya nokuthi yimiphi imithetho okufanele ilandelwe. Ukukhethwa nokugcinwa kwamaqanda Ukukhethwa kwamaqanda kungenye yezinyathelo ezibalulekile ekukhuliseni kwama-poults. Amaqanda aseTurkey ahlanzekile noma anombala obomvu, ehlanjululwa ngama-specks amancane.
Indlela yokukhula i-turkey poults ku-incubator
Inqubo yokuzalisa i-poults ene-incubator yinto ephethe umbuso okhethekile, lapho izinkukhu ezinamandla neziphilile zifika kuleli zwe. Ukukhetha i-incubator Abafuyi bezinkukhu ezikhukhulayo baye baqaphela ukuthi ngokukhipha amaqanda e-turkey ngokufanele, izinkukhu eziningi zivela (njengephesenti) kunokuthi ukuvuthwa kwemvelo yizinsikazi (ngokuvamile ama-turkeys ingxenye ye-clutch iboshiwe yisisindo sabo).
Kungakanani u-turkey ne-turkey omdala enesisindo
Ukugcina ama-turkeys akulona okunzima futhi kunenzuzo ngokwanele: inyama yokudla ihlale isengozini, futhi isisindo senyama sidlula, isibonelo, enkukhu ngisho nasezinyosi. Mayelana nesisindo se-turkey futhi sikutshele kule ngqikithi: ukuthi kuncike nokuthi yiziphi izizathu le nyoni ayitholi mass oyifunayo. Yini enquma isisindo Ake sicabangele izizathu ezingathinta isisindo senyoni: phansi - abesifazane ngokuvamile balinganisa cishe ama-kilogram amahlanu ngaphansi kwabesilisa; izinhlobo - izinyoni zihluka ngobukhulu, isakhiwo somzimba; Ubudala - ekahle enyameni yizinyanga ezingu-5-6.